Education Journalists Group – Page2– Official blog of Education Journalists Group
(2073 Ashad/Shrawan) Content Analysis Daily News Papers
Content Analysis अध्ययनको यस अवधिमा राजधानीबाट प्रकाशित हुने ठूला आकारका राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्र, कान्तिपुर, नागरिक, राजधानी, नयाँ पत्रिका र अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित शिक्षाको अन्तर्बस्तु विश्लेषण गरिएको छ । एसएलसी परीक्षाको नतिजापछि विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाको अध्ययनको तयारीका लागि जुट्ने, कलेजमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना प्रारम्भ हुने, आम अभिभावकको यसमा प्रत्यक्ष चासो रहने हुँदा यस समयमा शिक्षाका समाचारले सञ्चार माध्यममा प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसअवधिमा गोरखापत्र दैनिकले काठमाडौँ बाहिरका समाचारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ भने घटनामा आधारित समाचार बढी प्रकाशित गरेको पाइएको छ । साथै धेरैजसो समाचार वालाइन विना नै प्रकाशित गरिएको छ । साथै समसामयिक घटनामा आधारित समाचारको प्रकाशनलाई बढी प्राथमिकता दिनुका साथै ...
विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यन्वयनमा बाधक को ?
तुलसी भण्डारी वीरगन्ज/ विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनमा नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनहरु चुकेको बुद्धिजिबीहरुले बताएका छन् । बालबालिकाले स्वतन्त्र रुपमा पढ्न पाउने अधिकारलाई उनीहरुले निसंकोच अवरोध गर्दा उनीहरु नराम्रोसँग चुकेको बुद्धिजिबीहरुले बताएका हुन् । राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठनका यस्ता कार्यलाई यहाँका बुद्धिजिबीहरुले राजनीतिककर्मीहरुले आफ्नै प्रतिबद्धता उलंघन गरेको ठोकुवा गरे । शिक्षा पत्रकार समूहको पहलमा वीरगन्जमा भएको एक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो ठोकुवा गरेका हुन्् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणामा हस्ताक्षर गरी प्रतिबद्धता जनाउने अनि कार्यान्वयनका समयमा पछि हट्ने कार्य गलत छ । यो राजनीतिक दलहरुको आफ्नै प्रतिबद्धता सरासर उलंघन हो उनीहरुले भने । चार बर्ष ...
प्रहरीले पनि विद्यार्थी प्रयोग गर्नु गलत हो
तुलसी भण्डारी वीरगन्ज । आफ्नो छवि सुधार्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले सुरु गरेको ‘प्रहरी मेरो साथी’ अभियान पर्सामा पनि भरपुर विद्यार्थीको प्रयोग गरी कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । विभिन्न १० विद्यालयका २०९ जना विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी गराई पर्सा प्रहरीले पनि प्रहरी मेरो साथी अभियान चलाएको हो । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिसकेको अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरुले विद्यार्थीलाई हदैसम्म प्रयोग गरिरहेका वेला पर्सा प्रहरीले पनि यो क्रमलाई जोडतोडले साथ दिएको छ । नेपाल प्रहरीका नागरिक समुदाय केन्द्रित सबै कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुलाई प्रहरी मेरो साथीको एउटै अवधारणामा आबद्ध गर्ने उद्देश्य नेपाल प्रहरीको रहे पनि पर्सामा भने नागरिक केन्द्रित भन्दा पनि विद्यार्थी केन्द्रित बढि ...
शिक्षक-अभिभावक नै यस्ता,विद्यार्थी कस्ता ?
-निर्जला कक्षपती धनुषा घोडघाँस गाविस वडा नं ७ का विद्यालय जाने उमेर समूहका स–साना नानीहरु अहिले पनि विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय गएर पढ्नु भन्दा घरको कामलाई नै प्राथमिकता दिनु उनीहरुको मजबुरी बनेको छ । २१ औं शताब्दी सम्म आइपुग्दा पनि यहाँका बालबालिका तथा अभिभावकमा शिक्षा प्रति मोह नजाग्नु भनेको शिक्षाको महत्व नबुझ्नु नै हो । वडा नं ७ मा रहेको यो घोडघाँस गाविसमा अधिकांस तत्मा बस्ती रहेको छ । तत्मा भनेको दास थर हो । दलित र जनजातीको बाहुल्यता रहेको यो बस्तीमा चमार, डोम, मुसहर, पासवान जातीका मानिसहरु बस्ने गर्छन् । यस जातीका मानिसहरुको मुख्य व्यवसाय भनेको खेतीपाती गर्नु र ...